Volkswagen cusub oo loogu talagalay Fashion-ka iyo Ciyaaraha, Habka Shiinaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Volkswagen cusub oo loogu talagalay Fashion-ka iyo Ciyaaraha, Habka Shiinaha
Bishii Sebtembar 2021, Tartanka Wax-soo-saarka Baabuurka Dadweynaha ee Shiinaha (oo hadda ka dib loo yaqaan CCPC), oo ay martigelisay AutoCulture, ayaa ku soo dhammaaday magaalada Lianyungang, ee Gobolka Jiangsu. Waxaa ka mid ah, FAW-Volkswagen Audi A3L, mid ka mid ah saddexda nooc ee ugu fiican ee qoyska Jarmalka, ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad ee maaddooyinka xakamaynta dhawaaqa iyo dhimista buuqa iyada oo wax soo saarkeeda wanaagsan. Waxa kale oo ay ku jirtaa tartanka waxqabadka dhammaystiran iyo maaddooyinka imtixaannada elk. Labaduba waxay ku guuleysteen horyaalnimada waxayna si guul leh ugu guuleysteen horyaalka "Triple Crown" ee saldhigga xirfadda.
Audi, oo ah mid ka mid ah saddexda sayid ee Jarmal, ayaa had iyo jeer ahaa doorasho u hilowga macaamiisha. Iyada oo muuqaalkeeda quruxda badan iyo kantaroolka awoodda awoodda leh oo la isku halleyn karo, waxay soo jiidatay dad badan oo dhalinyaro ah. Si kastaba ha ahaatee, aragtida dad badan, Audi waxaa lagu calaamadeeyay "raaxo", "qaali ah", iyo "aan la gaari karin". Runtii tani ma jirtaa? Xaqiiqdii, waxaa jira noocyo badan oo taxane ah oo Audi ah oo Shiinaha ah maanta, waxay xoojiyaan waxqabadka wax soo saarka ee aad u fiican, laakiin qiimaha waa la heli karaa. Tusaale ahaan, Audi A3L oo aan maanta ka hadli doono, oo ah tiir-dhexaadka iibka qoyska Audi, marna ma filanaysid inaad ku iibsan karto qiimo dhan 180,000 yuan. Gaadhi la yaab leh.
Dharka iyo isboortiga ayaa wada nool, doorashada koowaad ee dhalinyarada
Suuqa macaamiisha baabuurta halkaas oo ay dhallinyaradu ku nool yihiin guud ahaan, in ay leeyihiin muuqaal qiimo sare leh waxay la macno tahay bilowga guusha. Dareenka jawiga iyo moodada ayaa noqday macluumaadka tixraaca ee muhiimka ah ee doorashadooda baabuurta. Marka tan la eego, sida taxanaha caadiga ah ee FAW-Volkswagen Audi, FAW-Volkswagen Audi A3L waxa la odhan karaa si adag u fahma maskaxda macaamiisha.
Baabuurkan waxa uu ku salaysan yahay mawduuca "naqshadda moodada" tan iyo markii la aasaasay, iyada oo la adeegsanayo luqadda naqshadaynta moodada ee ugu dambeysay ee qoyska Audi RS. Marka aad dhinaca hore ka eegayso, halbeegga caadiga ah ee qaadashada hawada laba geesoodka ah ee qoyska RS, oo leh qurxinta chrome-ka-madow ee malabka, waxay muujinaysaa farxadda iyo jawiga; Qaadashada hawadu waxay ku wareegsan tahay labada dhinac ee bambarka hore iyo nalalka LED-yada ee fiiqan ayaa midba midka kale ku dhawaaqayaa. Xiisadda muuqaalka ah ayaa la sii daayaa ilaa xadka ugu sarreeya, mana lumin magaca "warshada iftiinka" ee Audi; khadadka dhinaca ee jidhku waa kuwo fiiqan oo ay ka buuxaan dareen isboorti, laga bilaabo nalalka dambe ee dambe ilaa dhexda fiiqan ee nooca-dhexda ah ee fidsan ilaa nalalka hore, sidaas darteed gaariga oo dhan Waxay u egtahay in ay soo bandhigto qurux muuqaal ah oo muuqaal ah iyo dareenka hagaajinta. Waxaa ka mid ah moodooyinka heerka isku midka ah, FAW-Volkswagen Audi A3L waxaa la odhan karaa waxay u taagan tahay muuqaalka ugu sarreeya waxayna ku habboon tahay macaamiisha kuwaas oo raacda moodada dhalinyarada iyo isboortiga.
Sifooyin badan oo raaxo leh, taasoo ka dhigaysa Audi A3L mid aad u dhow
Sida maahmaahdu tiraahdo, qaabka dibadda waxaa loogu talagalay dadka kale si ay u arkaan, gudahana waa jawiga ku weheliya wakhtiga ugu dheer. Gaar ahaan baabuurka qoyska ee is haysta, waa inuu awood u yeeshaa inuu helo jawi waditaan oo raaxo leh nolol maalmeedka ka hor inta uusan u jeclaan macaamiisha. Kani sidoo kale waa iibinta dheer ee FAW-Volkswagen Audi A3L ee suuqa baabuurta qoyska. mid ka mid ah sababaha.
Si aad ula jaanqaado meelaynta baabuurka qoyska, saldhiga taayirrada FAW-Volkswagen Audi A3L waxaa lagu dheereeyey 50mm, si aysan dhib u ahayn in safka labaad ee rakaabka ay u janjeeraan lugaha. Iyada oo ku saleysan qaabka font, isticmaalka xariif ah ee cilladaha, foomamka sare iyo kuwa hoose si ay u soo bandhigaan quruxda warshadaha casriga ah, ka dibna lagu dhejiyo laba shaashad oo tayo sare leh, qurxinta chrome iyo qaabka hawada la mid ah sida Urus, gudaha waa la safeeyey. . Waxa la odhan karaa waa bash-bash.
Yaa yidhi sedan is haysta ma daba geli karo xamaasad iyo xamaasad?
Inta badan baabuurta qoyska ee is haysta waxay raacaan raaxada iyo qaadistooda, laakiin inta badan way iska indhatiraan dhinaca waxqabadka mana siin karaan darawalka khibradda wadista gallooniska. Indhaha jiilka da'da yar ee macaamiisha, tani gabi ahaanba waa wax aan la aqbali karin. Haddii aad rabto in aad raacdo raaxada xawaaraha iyo xamaasadda leh meelaynta sedan is haysta, waxaa laga yaabaa in FAW-Volkswagen Audi A3L ku habboon yahay.
In kasta oo FAW-Volkswagen Audi A3L loo dhigay sidii baabuur qoys oo is haysta, iyo EA211 1.4T engine + 7-xawaaraha dual-clutch gearbox uu ku qalabaysan yahay waxba in la yidhaahdo marka la eego xuduudaha, waxa ay ku siin kartaa wareegga ugu sarreeya ee 250N·m iyo awoodda ugu badan ee 110KW. Waxay si buuxda u buuxin kartaa shuruudaha waxqabadka ee darawalnimada maalinlaha ah ee dhalinyarada. Waxaa intaa dheer, FAW-Volkswagen Audi A3L waxa kale oo ay leedahay xarun hoose oo cuf-jiidad, cuf fudud oo aan kala go 'lahayn iyo hakinta chassis dhexdhexaad ah, kaas oo keenaya wax qabadkeeda hab-dhaqanka chassis-ka heer sare, isteerinka oo tilmaamaya si sax ah, iyo taayirrada gadaal marka baabuurku soo jeesto. si ba'an. Raadinta sidoo kale waa ka saxsan tahay, oo leh farxad wadista oo aad u sareysa!
Waxa sidaas oo kale dhacday in FAW-Volkswagen Audi A3L uu wakhtigan ka qaybqaatay tartanka 2021 CCPC. Iyada oo la adeegsanayo koronto tayo sare leh iyo hagaajinta chassis awood leh, waxay siin kartaa darawalka raaxaysiga galloping haddii ay bilaabayso dardargelinta ama geesaynta. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad awood u yeelatid inaad raacdo xawaaraha oo aad ku raaxaysato madadaalo wadista adigoo ku qanacsan dhaqdhaqaaqa maalinlaha ah, FAW-Volkswagen Audi A3L waa doorashadaada ugu fiican.
Guud ahaan, FAW-Volkswagen Audi A3L waxay leedahay tayo aad u wanaagsan oo aan lagu qabsan karin baabuur la mid ah dhinacyo badan. Muuqaalkeeda sare, raaxada iyo waxqabadka awoodda leh ayaa la mid ah, tani sidoo kale waa awoodda ay u leedahay inay hogaanka u qabato berrinka gudaha ee sedan. Sababta ayaa ah in gaarigan uu sidoo kale u jeclaan doono dad aad u badan.
Baabuurkan waxa uu ku salaysan yahay mawduuca "naqshadda moodada" tan iyo markii la aasaasay, iyada oo la adeegsanayo luqadda naqshadaynta moodada ee ugu dambeysay ee qoyska Audi RS. Marka aad dhinaca hore ka eegayso, halbeegga caadiga ah ee qaadashada hawada laba geesoodka ah ee qoyska RS, oo leh qurxinta chrome-ka-madow ee malabka, waxay muujinaysaa farxadda iyo jawiga; Qaadashada hawadu waxay ku wareegsan tahay labada dhinac ee bambarka hore iyo nalalka LED-yada ee fiiqan ayaa midba midka kale ku dhawaaqayaa. Xiisadda muuqaalka ah ayaa la sii daayaa ilaa xadka ugu sarreeya, mana lumin magaca "warshada iftiinka" ee Audi; khadadka dhinaca ee jidhku waa kuwo fiiqan oo ay ka buuxaan dareen isboorti, laga bilaabo nalalka dambe ee dambe ilaa dhexda fiiqan ee nooca-qaababka ah ee fidinta nalalka hore si gaariga oo dhan uu u muuqdo inuu soo bandhigayo qurux muuqaal ah oo muuqaal ah iyo dareenka hagaajinta. Waxaa ka mid ah moodooyinka heerka isku midka ah, FAW-Volkswagen Audi A3L waxaa la odhan karaa waxay u taagan tahay muuqaalka ugu sarreeya waxayna ku habboon tahay macaamiisha kuwaas oo raacda moodada dhalinyarada iyo isboortiga.